Bakhubazekileyo | News24
LAST UPDATED: 2019-02-23, 07:14
Ukusuka ekhohlo ngu Phindile Makhaphela, Mzubanzi Balintulo, Xoli Mengqane, Liyanda Handula, Nomhle Gavu kunye noPhumzile Nteyi. PHOTO: SIYABONGA KALIPA
Inkampani iMasithuthuke Holdings kwakunye nabaququzeleli be Gugulethu 60th Anniversary Celebrations banikele ngezihlangu kwakunye neencwadi kwizikolo ezibini kuleveki iphelileyo.
I-Masithuthuke yinkampani ejamelene nophuhliso lwabantu abamnyama kwezoshishino, kuquka amashishini akhasayo kwakunye nasele ephumelele.
Le nkampani ikwanikezela ngeenkonzo zophuhliso kwi nkampani zabucala nezika wonke-wonke.
Ngama 50 abafundi abathe baxhamla ngethuba le nkampani indwendwele isikolo sezakhono iSiviwe, eGugulethu. Inikezele ngezihlangu ezingama 50. Ukanti ithe yanikezela ngencwadi, izixhobo zokubhala, kwakunye nezixhobo zezibalo kwisikolo saba khubazekileyo iThembalethu.
Bathe isizathu sokuba bakhethe ezi zikolo, kungenxa yokuba oluhlobo lwezikolo luye lulibaleke ebantwani abaye bafake isandla ezikolweni.
Isekela-nqununu lase Thembalethu uNomhle Gavu, uthe baya lwamkela kakhulu uncedo abathe balifumana kuba ayinguye wonke umntwana okwaziyo ukuzithenga izixhobo ezibanceda ekufundeni.
“Abanye babantwana bethu abakwazanga kuzithenga ezi zinto bazifumana namhlanje, kuba baphila nge nkam-nkam eye incedise emakhayeni abo,” utshilo uGavu.
Uthe esi siphiwo sizakubanceda kakhulu abafundi kuba abazokuzibona behlelelkile kuba bengenazo izinto ezithile, kwaye lonto izakwenza ingqondo zabo zihlale ezifundweni zabo.
U-Liyanda Handula we Masithuthuke uthe wayengumfundi wase Siviwe phambi kokuba ibe sisikolo sezakhono.
Uthe yindlela yabo yokubuyisela kubantu bakubo abangafikelelekiyo kwezinye izinto.
“Siye safumanisa ukuba eSiviwe kukho abantwana abangenazo izihlangu zesikolo kuba kusokolwa emakhayeni abo,” utshilo uHandula.
Uthe isizathu sokuba bakhethe iThembalethu kukuba baye baqaphela ukuba izikolo zabantu abakhubazekileyo ziye zingafumani ziphiwo kwelixesha lokuqala konyaka.
Umququzeleli we Gugulethu 60th Anniversary Celebrations, nethe yasingatha umsitho weminyaka engama 60 kwasekwa iGugulethu, uPhumzile Nteyi uthe ukubuyela esikolweni yinto eyenzeka nyaka- na-nyaka kwilizwe liphela, kodwa izikolo zabo bakhubazekilyo ziyalibaleka. Ubongoze abantu ukuba bazijonge izikolo zaba khubazekileyo.
Uthe abantwana abasuka kumakhaya asokolayo baye basiyeke phakathi isikolo kuba bezibona bengafani nabanye abafundi.
Uthe yilonto ke beqonde ukuba mabancede apho bakwazi khona ukulwa nento yabantwana abayeka phakathi esikolweni.